Khasaaraha ka dhashay dagaalkii xalay ka dhacay Xarunta Baarlamaanka & Wararkii u dambeeyey ee ammaanka Xarunta.
GAROOWE(P-TIMES) – Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaal fiidnimadii xalay ka dhacay xarunta golaha baarlamaanka Puntland oo uu iska horimaad kudhexmaray ciidamada Ilaalada xaruntaas iyo ciidamo kale oo katirsanaa kuwa ammaanka ee Puntland, ka dib markii ay doonayeen ciidamo dheeraad ah in lageeyo xarunta lagana qaado kuwa gudoomiyaha baarlamaanka.
Xukuumadda ayaa abaabushay Mooshin looga soo horjeedo Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland CabdiXakiim Dhooba-Daareed, kaas oo ay saxiixeen ku dhawaad 40 xildhibaan, waxaana muuqatay in ay doonaysay ina y kalfadhiga baarlamaanka furto, taas oo Arbacadii uu fasax galiyey baarlamaanka Gudoomiyuhu.
Khasaaraha ka dhashay dagaalka xalay ayaa lagu sheegay dhimashadu in ay gaartay 4 qof, sidaas oo kalena dhaawacu u gaarayo 5 ruux oo ay labo kamid ah fudud yihiin, mar horena laga saaray goobaha Isbitaalada.
Sidaas oo kale, burburka ayaa soo gaaray goobo ganacsi oo kuyaala magaalada Garoowe oo ay gaartay rasaasta ay labada dhinac is dhaafsanayeen.
Abaarihii 1dii habeenimo ee waqtiga Soomaaliya ayay ciidamadii ku jiray gudaha xarunta golaha baarlamaanka ee sugayay ammaanka ay ka baxeen, oo ay ku baxeen dadaal ay sameeyeen guddoonka baarlamaanka iyo qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka.
Saaka ayaa aad loo adkeeyey ammaanka xarunta golaha oo dhan, waxaana ciidamo dheeraad ah oo ah kuwa Madaxtooyada lageeyey agagaarka xarunta oo dhan, sidda ay ku waramayaan wariyayaashu.